ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း & ဒါနများအတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမိသားစုဖောင်ဒေးရှင်းမှဖွဲ့စည်းခြင်း
တစ်ဦးကဆွစ်ဇာလန်မိသားစုဖောင်ဒေးရှင်းက သာ. ကြီးမြတ် privacy ကိုပေး, မိသားစုရိုးအမြစ်ကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်ဖြစ်သောကြောင့်အစိုးရ၏ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မှတ်ပုံတင်မည်နှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ရှောငျနိုငျနိုင်ငံခြားသားများအားဖြင့်ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။ သီးသန့်နိုင်ငံခြားသားများအားဖြင့်အပြည့်အဝပါဝင်တည်ထောင်သူ, အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ, ဂေါပကနှင့်အခြားနိုင်ငံများတွင်တည်ရှိသောအားလုံးပိုင်ဆိုင်မှုအပါအဝင်ခွင့်ပြုထားပါသည်။
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ရိုးအမြစ်ကိုပိုမိုအရုပ်ဆိုး non-profit ရိုးအမြစ်နှင့်မိသားစုရိုးအမြစ်ကိုထက်ပိုမိုမြင့်မားကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်ဝင်ငွေအခွန်ပေးဆောင်။
အဆိုပါဖွဲ့စည်းရေးအုပ်ချုပ်ခွင့်ဥပဒေ, လက်ခံနိုင်ဖွယ်လှုပ်ရှားမှုများအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, အခြေခံအုတ်မြစ်များရပ်စဲမြို့ပြ Code ကိုဆောင်းပါးများ 80-89 ဖြစ်ပါတယ်။ ဆွစ်ဇာလန်တရားအညီတစ်ဦးဖောင်ဒေးရှင်းတိကျတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုပဒေသာပင်များလည်းအတူနေသူများကဖန်တီး။ ဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်သူများအထူးရညျရှယျအဘို့ဆက်ကပ်အပ်နှံပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုလွတ်လပ်သောရေကူးကန်နဲ့ဥပဒေရေးရာ entity အတိုင်းဤဖော်ပြပါ။
ဆွစ်ဇာလန်ဥရောပ၌တည်ရှိသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတရားဝင် "ဆွစ်ဇာလန်အဖွဲ့ချုပ်" ဟုခေါ်သည်။
၎င်း၏နိုင်ငံရေးစနစ်ကတစ်ဦးရွေးချယ်တင်မြှောက်နှစ်ခုအိမ်သူအိမ်သားပရိသနှင့်ဖက်ဒရယ်အဓိပတိနှင့်အတူတစ်ဦး "ဖက်ဒရယ် Semi-ညွှန်ကြားဒီမိုကရေစီပါလီမန်သမ္မတနိုင်ငံ" အဖြစ်ဖော်ပြထားသည်။
• 100% နိုင်ငံခြားရေးပါဝင်လာ: နိုင်ငံခြားသားများဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာတည်ရှိသောနိုင်ငံခြားတည်ထောင်သူ, အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ, အလောင်းတွေကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း, ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အတူရိုးအမြစ်ကိုဖန်တီးလိမ့်မည်။
•အနိမျ့အခွန်: အဆိုပါဖက်ဒရယ်ကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းကိုသေးငယ်တဲ့မြို့တော်စည်ပင်ကအခွန်နှင့်အတူ 4% ကဆက်ပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေအခွန်ပေးဆောင်အမေရိကန်အခွန်ထမ်းလူတိုင်းမိမိတို့၏အစိုးရများအားလုံးကိုဝင်ငွေသတင်းပို့ရမည်။
•ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း: အပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးပိုင်ဆိုင်သီးခြားဥပဒေရေးရာ entity သကဲ့သို့, တည်ထောင်သူနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များအနာဂတ်အကြွေးပိုင်ဆိုင်မှုရယူခြင်းမှကာကွယ်လိမ့်မည်။
ရိုးအမြစ်ကိုဆွစ်ဇာလန်အခြားဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများလွန်းအလားတူအမည်များကို အသုံးပြု. ကိုရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။
ရိုးအမြစ်ကိုတိကျတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြည့်ဆည်းရန်ဖန်တီးနေကြတယ်ကတည်းကသူတို့ရဲ့သက်တမ်းကြာချိန်ကိုမကန့်သတ်ဆွစ်ဇာလန်ဥပဒေအောက်တွင်တည်ရှိ။ သူတို့ကအစဉ်အမြဲဖြစ်ယူဆနေကြသည်။ တစ်ဦးကဆွစ်ဇာလန်တရားရုံးကအခြေခံအုတ်မြစ်များအတွက်တိကျသောရည်ရွယ်ချက်မပြည့်စုံပြီဟုဆိုကာစီမံခန့်ခွဲမှုတို့ကအသနားခံစာပေါ်မှာအခြေခံအုတ်မြစ်ပျော်ပေမည်။
ရည်ရွယ်ချက်, ရည်ရွယ်ချက်, ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်အဖွဲ့အစည်းက: ဆွစ်ဇာလန်တရားကိုအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုဖန်တီးရန်အလို့ငှာအောက်ပါဒြပ်စင်များလိုအပ်သည်။
ထို့ကြောင့်, အမြစ်ကိုရေးသားထားသောဖောင်ဒေးရှင်းမှပဋိညာဉ်စာတမ်း (ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ) နဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့နေကြသည်။ တိုင်းအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုရှင်းလင်းစွာ၎င်း၏စင်းလုံးငှားမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရမည်။ တစ်ဦးကမိသားစုဖောင်ဒေးရှင်းပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်မိသားစုအကျိုးအမြတ်၏ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်။
• Foundation ၏ရည်ရွယ်ချက်, နှင့်
တိုက်မြစ်ကိုအများဆုံးရိုးအမြစ်ကိုကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Registry ကိုအတူမှတ်ပုံတင်ရန်ရမယ်သီးခြားဥပဒေရေးရာ entity သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သို့သော်ခြွင်းချက်တခုကိုမိသားစုတိုက်မြစ်တည်ရှိ။
ပုဂ္ဂလိကရိုးအမြစ်ကို "မြင့်မြတ်သောရည်မှန်းချက်" အဖြစ်ဖော်ပြထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရမည်။ ဤသည်စီးပွားဖြစ်လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သာမန်ရိုးအမြစ်ကနေသူတို့ကိုခွဲခြား။
အဆိုပါအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများအပေါငျးတို့သတည်ထောင်သူနှင့်နီးစပ်သူမိသားစုဝင်များသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်များမှာဘယ်မှာမိသားစုရိုးအမြစ်ကိုနေသမျှကာလပတ်လုံးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအပေါငျးတို့သအကူအညီများ, တည်ထောင်ခြင်း, ဒါမှမဟုတ်မိသားစုဝင်များ၏ပညာရေးအတွက် designated နေကြသည်အဖြစ်ခွင့်ပြုထားပါသည်။
Foundations များအတွက်ဖက်ဒရယ်ကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ကထူထောင်အဖြစ်ဖောင်ဒေးရှင်းအဘို့အနိမ့်ဆုံးကနဦးအရင်းအနှီး 50,000 CHF ဖြစ်ပါတယ်။
တည်ထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းကောင်စီသို့မဟုတ်ဒါရိုက်တာဖောင်ဒေးရှင်းဘုတ်အဖွဲ့သမ္မတအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရအဖြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်အတူပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။ တည်ထောင်သူနှင့်အတူအချို့သောအင်အားကြီးရှိသည်သောလမ်း၌ရေးထားလျက်ရှိ၏နိုင်သည့်ဖောင်ဒေးရှင်းပဋိညာဉ်စာတမ်း (ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ) တွင်သတ်မှတ်ထားသောအဖြစ်ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်။
ဆွစ်ဇာလန်တရားဖောင်ဒေးရှင်းမှကောင်စီ (Stiftungsrat) က, ဒါမှမဟုတ်ဒါရိုက်တာတစ်ဦးဖောင်ဒေးရှင်းကဘုတ်အဖွဲ့ (Stiftungsvorstand) ကတစ်ခုခုကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အခြေခံအုတ်မြစ်ဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းကပဋိညာဉ်စာတမ်းတစ်ကောင်စီသို့မဟုတ်ဒါရိုက်တာတစ်ဦးဘုတ်အဖွဲ့သူတို့ခန့်အပ်ဖယ်ရှား, အစားထိုးခြင်း, လျော်ကြေးငွေမည်သို့နှင့်အတူအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုစီမံခန့်ခွဲကြလိမ့်မည်ဟုတ်မဟုတ်ကိုဖော်ပြရန်သငျ့သညျ။
သီးခြားဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အမျှရိုးအမြစ်ကိုဆွစ်ဇာလန်ကော်ပိုရိတ်ဝင်ငွေနှင့်မြို့တော်အခွန်မှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ တစ်ခုတည်းသောခြွင်းချက်အားလုံးအခွန်အနေဖြင့် 100% ကင်းလွတ်ခွင့်ကိုခံစားသူ "အများပြည်သူအကျိုးအတွက်" ရိုးအမြစ်ကိုအတွက် "non-profit" ရည်ရွယ်ချက်များအဘို့ဖြစ်၏။
အဆိုပါကော်ပိုရေးရှင်းဝင်ငွေအခွန်အမြတ်အစွန်းအပေါ်အခြေခံသည်။ တည်ထောင်သူများကအခြေခံအုတ်မြစ်မှအားလုံးပံ့ပိုးမှုများကို taxable အမြတ်အစွန်းထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက်နှင့်မကြသည်မဟုတ်။ အမြတ်အစွန်း 10,000 CHF (လက်ရှိ $ 10,357 အမေရိကန်ဒေါ်လာ) အရအခါအမြတ်အစွန်းအပေါ်ဖက်ဒရယ်နှင့်ခရိုင်အခွန်လျှောက်ထားကြပါဘူး။ ကြောင်းပမာဏကိုအထက်အမြတ်အစွန်းတစ် 4% နှုန်းဖက်ဒရယ်အစိုးရအခွန်ကောက်နေကြသည်။ ထို့အပြင်စီခရိုင် (စည်ပင်သာယာ) ကအမြတ်အစွန်းအပေါ်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အခွန်ကောက်ခံခြင်း။
မြို့တော်အခွန်ထိုကဲ့သို့သောအိမ်ခြံမြေနှင့်လုံခြုံရေးအဖြစ်ဆွစ်ဇာလန်မှာတည်ရှိပါတယ်အားလုံးပိုင်ဆိုင်မှုများ၏စျေးကွက်တန်ဖိုး (မစာအုပ်တန်ဖိုး) အစုရှယ်ယာ (ချေးငွေနှင့်ပေါင်ရေတွက်ကြသည်မဟုတ်) အပေါ်မှာအခြေခံထားပါသည်။ ပထမဦးဆုံးအ 80,000 CHF (လက်ရှိ $ 82,856 အမေရိကန်ဒေါ်လာ) မြို့တော်အခွန်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအခွန်နှုန်း taxable မြို့တော်၏ 0.5% ဖြစ်ပါတယ်။
အုပျခြုပျရေးအဖှဲ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်များ၏တာဝန်ယူမှုသည်ဆွစ်ဇာလန်အခြေခံအုတ်မြစ်ဥပဒေများဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့်, ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်ကော်ပိုရိတ်ဘုတ်အဖွဲ့မှ related ဆွစ်ဇာလန်ဥပဒေများလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးစလုံးတရားမနစ်နာမှုများသို့မဟုတ်စာချုပ်န်ထမ်းခြင်းငှါ, တည်ထောင်သူနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများအားဖြင့်ပြည်တွင်းထိုက်မည်အကြောင်းဆိုလိုသည်။ အသင်းဝင်များသာသာတရားမနစ်နာမှုများအားဖြင့်တတိယပါတီများမှမှပြင်ပမှပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရခံထိုက်ပေရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးကတရားမျှတမှုမရှိခြင်းကိုအခြားသူများကိုထိခိုက်နစ်နာစေသည့်တကာသို့မဟုတ်နွှဲလုပ်ရပ်များပါဝင်သည်။
သူတို့ကအစိုးရနှငျ့မှတျပုံတငျရန်မလိုပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိသားစုရိုးအမြစ်နှင့် ပတ်သက်. အဘယ်သူမျှမသတင်းအချက်အလက်မဆိုအများပြည်သူမှတ်တမ်းများတွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်။
တစ်ဦးကဆွစ်ဇာလန်မိသားစုဖောင်ဒေးရှင်းကဤအကြိုးခံစားခှငျ့ကိုပေးစွမ်းသည်: နိုင်ငံခြားပါဝင်မှု, privacy ကိုနိမ့်အခွန်ငွေ, တည်ထောင်သူထိန်းချုပ်မှုမရှိ, အစီရင်ခံ, အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အစာရှောင်ခြင်းဖွဲ့စည်းရေးပြည့်စုံ။